Vaovao - Fivoriana fiarovana amin'ny asa
Tamin'ny Mar.1, 2020 Jitai Electronics Co., Ltd dia nanao fivoriana fiarovana ny asa ataon'ny dept Production. hanao drafitra ho an'ity taona ity amin'ny fiarovana ny asa.
Fandaminana ny fiarovana ny asa amin'ny taona 2020
Manomboka amin'ny 1 Martsa 2020 ka hatramin'ny 31 Des 2020 dia misy dingana telo:
Dingana voalohany: 1 mart hatramin'ny mar.31, ny mpiasa rehetra amin'ny departemanta rehetra dia nianatra ny hampita ny "tetikasa miasa fanitsiana manokana ho fiarovana ny asa" aorian'ny fanetsehana sy fanatsarana ny feon'ny fieritreretana ny mety ho fihoaram-pefy ary ny atomôma tsara fanovana manokana. Ny departemanta rehetra dia nanatsara ny fampiharana ny votoatin'ny fanitsiana manokana, nampitombo ny fahafaha-mitaky ny fitaovana sy ny toerana ao amin'ny departemanta misy azy ary ny fampiasana azy izay miantoka ny loza mety hitranga tsy misy jamba, faritra maty ary donot.
Dingana faharoa: apr. 1 hatramin'ny sept. 30, ny sampana tompon'andraikitra rehetra dia nifantoka tamin'ny mpiasa lehibe, teboka manan-danja ary rohy manan-danja ary nanao ny fitantanana feno fanaraha-maso tranonkala feno. Ny fametrahana ny fiarovana mialoha ny fiarovana roa dia miasa amin'ny sampana rehetra amin'ny alàlan'ny habetsaky ny toetoetra mampidi-doza sy ny toerana azo antoka amin'ny departemanta rehetra ary nanery ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ary nandray fepetra matotra tamin'ny fanitsiana feno ary niantoka ny loza mety hitranga rehetra nidina ary ny fandrefesana nidina sy voafehy. mba ho.
Thrid stage: 1 Oktobra hatramin'ny 31 Des. 31, ny sampana rehetra dia tokony hiorina amin'ny sampana tompon'andraikitra rehetra ary ny fanovana manokana hanatsarana sy hanamafisana ny vokan'ny fanovana manokana.
1. Fitantanana henjana, fanazava ny andraikitra, fanitsiana habe. Ny talen'ny jeneraly, ny mpitantana, ny talen'ny asa, ny mpitarika ny vondrona ary ny mpiasa rehetra dia tokony hikarakara tsara an'io fandaminana ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana ny asa io. Raiso am-pahatokisana ny andraikitra, ny fandaminana tsy misy dikany ary ataovy izay hanetsehana ireo mpiasa rehetra mety hampidi-doza sy hitaterana ireo olana hita sy lozam-pifamoivoizana eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny asa isaky ny ambaratonga ary manitsy avy hatrany ary manaova fisoratana anarana sy fanaraha-maso ho an'ny hafa mba tsy hovaina ara-potoana.
2. Manamafy ny fanabeazana sy ny fitantanana ny saha. Mandritra ny vanim-potoana fandinihan-tena sy fanitsiana ireo loza mety hitranga dia hampihatra fiofanana azo antoka ara-teknika ho an'ny mpiasa rehetra izany ary hampihatra ny rafitra fiofanana mialoha ny asa. Izy io dia hametraka tontolon'ny asa matevina amin'ny alàlan'ny fanofanana, lahateny, torolàlana an-tsaha sy ny endrika hafa ary koa ny famantarana famantarana fiarovana, jiro fitandremana fiarovana, fampielezana fahalalana momba ny fiarovana.
3. Manamafy ny fitantanana vonjy maika, mandrindra famerenana vonjy maika. Ny fanatsarana ny mpiasa rehetra ao amin'ny ozinina mifandraika amin'ny vonjy taitra sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tenany sy ny tenany ary ny fikasana amin'ireo faritra mampidi-doza ao amin'ny orinasa sy ny fomba mampidi-doza dia manadihady sy manitsy ary manitsy ny drafitra efa nomanina momba ny fanitsiana vonjy maika sy ny fandrefesana eny an-tsaha mandritra izany fotoana izany handamina famerenana ny drafitra efa voaomana mialoha.
Ny orinasanay dia hanery mafy ny "fomba fanadinana valisoa sy sazy amin'ny fiarovana ny asa" sy ny rafitra havana. Hovaliana izany noho ny fahatratraranao tanjona amin'ny asa isan-taona. Izy io dia horaisina amin'ny fomba matotra na saziana amin'ny departemanta na ny mpiasa izay nahatonga ny loza noho ny fisorohana loza mety hitranga tsy ara-potoana. Ho fampitandremana lehibe ho an'ny fanabeazana ho an'ireo izay manitsakitsaka ny fifehezana ara-potoana ary homena sazy henjana ireo izay nanao imbetsaka.